पुरुषको सबैभन्दा छिटो नजर पुग्ने महिलाका अंग कुन-कुन हुन् ?| Gandaki Voice
पुरुषको सबैभन्दा छिटो नजर पुग्ने महिलाका अंग कुन-कुन हुन् ?
पोखरा । जब एक पुरुषको एक महिलासँग जम्काभेट हुन्छ, उसको पहिलो नजर महिलाको कुन अंगमा पर्ला ? धेरै महिलाको अनुमान फेल खान सक्छ ।
पुरुषको पहिलो नजर महिलाको छात्ती पर्छ भन्ने धेरै महिलालाई लाग्दो हो । तर, होइन । पछिल्लो एक सर्वेक्षणले देखाए अनुसार पुरुषको पहिलो नजर महिलाको आँखामा पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको एक सर्वेक्षणको अनुसार आँखापछि पुरुषहरुको नजर उनको मुस्कानमा केन्द्रित हुन्छ ।
तस्वीर : गुगलत्यसपछि मात्रै पुरुषको नजर अन्त मोडिन्छ । सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार ७० प्रतिशत पुरुषको पहिलो नजर आँखामा पर्छ । ७० प्रतिशत पुरुषले पहिलो भेटमा महिलाको आँखामा सबैभन्दा पहिला हेर्छन् ।
ब्रिटेनको आई ड्रप नामको संस्थाले दुई हजार मानिसमा यो सर्वे गरेको थियो । जसमा एक हजार महिला र एक हजार पुरुष सामेल थिए ।
यिनीहरुलाई जब पहिलो पटक ‘अपोजिट सेक्स’को मानिसहरुसँग भेट हुन्छ तव कुन अंगमा पहिलो नजर जान्छ भनेर सोधिएको थियो । जसमा ७० प्रतिशतले पहिलो नजर आँखामा, दोस्रोमा मुस्कान र तेस्रोमा महिलाको छात्तीमा जाने बताए ।
सर्वेका अनुसार पुरुषको केही ध्यान महिलाहरुको तौल र हेयर डिजाइनमा पनि जाने पाइएको थियो । यी सबैमा नजर परिसकेपछि पुरुषहरुलाई यदि ती महिला मनपरेमा मात्र उनीहरुको नजर ड्रेस सेन्स र उचाईमा जान्छ ।
सर्वेको अनुसार पुरुषहरुले महिलाहरुको नाकलाई सबैभन्दा कम महत्व दिएको पाइयो । मतलब पुरुषहरुले महिलाको नाकलाई सबैभन्दा अन्तिममा हेर्छन् । तर महिलाहरुले पुरुषहरुको उचाईलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । महिलाहरु पुरुषहरुको छालाको रंगमा पनि ध्यान दिँदैनन् ।–एजेन्सी
वेश्या पुरुषको दर्दनाक कथा: म्यामहरुको...
सम्भोग बढी, झगडा कम !
भण्डारीको व्यंग्य : ओली ‘बा’ ले कानमा कपास हाल भन्ने दिन आउला जस्तो छ
वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ ? (बुझ्नैपर्ने यी ३० कुरा)
सेक्स पावर बढाउन के-के खाने ?